चुनौती बन्दै ‘ब्रेन ड्रेन’ SULSULE:A Truly Nepali News Portal
विगतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिले आफ्नो देशमा भविष्य नदेखेर विदेशिने ब्रेन ड्रेनको प्रचलन केही थियो । अहिल रोजीरोटीका लागि युवा जनशक्ति विदेशिनुलाई ब्रेड ड्रेनको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । बे्रनड्रेनका अनेकौं कारण हुन सक्छन् । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको नाममा स्वदेशमा रोजगारको अवसरको खडेरी तथा विदेशमा आकर्षक आर्जनको भ्रम आदीले विदेशिने मनोविज्ञान बढेको पाइन्छ ।
ब्रेड ड्रेन प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्न स्वरोजगारमूलक शिक्षाको अहम भूमिका रहन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र दैनिक २ हजारको हाराहारीमा रोजगारीको लागि युवायुवती विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउछ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ लाखका दरले युवाशक्ति रोजगारीका लागि तयार हुन्छन् । राज्यबाट देशभित्र रोजगार सिर्जनाका लागि खासै पहल नभएको कारणबाट अहिले झण्डै ५० लाख युवाहरु रोजीरोटीका लागि भौतारिदै विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन विवश भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि खासै प्रगति भएको पाइँदैन । निकट भविष्यमा हुन गइराखेको संघीय चुनावपछि मात्र मूर्तरुप लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले ब्रेनडे«न र ब्रेडड्रेनका कारण नेपाली युवाजनशक्ति विदेश पलायनले विकरालरुप लिदै छ ।
उच्च शिक्षाको लागि उपयुक्त शिक्षणसंस्था तथा आफ्नो योग्यताअनुसारको जागिर नपाएको कारणबाट विगत लामो समयदेखि प्राज्ञहरु विदेश पलायन हुंदै आएको विषय नौलो थिएन तर पछिल्लो समय माओवादी द्वन्द्वकालदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । युवाहरुले आफ्नो देशमा भविष्य नदेख्नु देशको भविष्य पनि अन्धकार हुनु हो । विदेशिएका कामदारहरुबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेकोमा सरकारमा रजगज गर्नेहरु मख्ख पर्नु शुभसंकेत होइन । ऊर्जाशील बेरोजगार युवाशक्तिलाई विदेश पठाएर नयाँ नेपाल बनाउने नारा अलाप्नु सत्ताधारीहरुको ढाँटको खेति मात्र हो ।
आफ्नै देशमा उपलब्ध पेशालाई अंगाल्न हिच्किचाउँदै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर खाडी मूलुकको प्रचण्ड गर्मीमा जोखीमपूर्ण वातावरणमा सामान्य सीप र ज्ञान भए मात्र पुग्ने तरकारी, फलफूल खेती, भेडा चराउने, गधाजोत्ने जस्ता कृषिजन्य काम गर्न तँछाडमछाडका साथ विदेश जाने फेसन नै भएको छ । अर्काेतर्फ छिमेकी देशहरुबाट रोजगारीका लागि नेपाल आएर फलफूल तरकारी र अन्य सामान बेच्न सहर बजारमा मात्र नभएर विकट गाउँहरुमा पनि छ्यापछ्याप्ती पुगेको पाइन्छ ।
तर त्यही काम गर्वसाथ स्वदेशमा नेपालीले किन गर्दैनन् ? त्योभन्दा तल्लोस्तरको काम गर्न मुगलान नै पस्नुपर्ने किन? यस्तो मनोवैज्ञानिकतालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ? आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएमा चारैतिर अभावै अभावबाट छटपटिई निराश भई विरक्तिएर विदेशिएका नेपाली झन् कष्टकर, अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएर बिचल्लीमा परेको समाचार छापामा बग्रेल्ती पाइन्छ । यसरी तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा परेर तडपिएको चरितार्थ त्यहाँ पाइन्छ । त्यही पेशा स्वदेशमा गर्दा र विदेशमा गर्दा समाजको र व्यक्तिको हेराइमा फरक हुनाको कारण के हो ? हाम्रो शिक्षाले विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न के गर्नुपर्ला ? चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्दछ ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय जनमुखी, प्रगतिशील जीवनोपयोगी आदि विशेषणबाट सम्बोधन गरिएको पार्ईन्छ । गुणस्तर प्राप्ताड्ढको आधारमा निक्यैलगर्ने प्रचलन प्रशस्तै छ । जसको कारणबाट आमा बुबाको अर्थ नबुझने तर डयाड ममको संस्कारमा हुर्कने, दुध कहाँबाट आँउछ भन्दा डेरीबाट भन्ने गाई भैंसीको जानकारी नराख्ने, कृषिमा हलो फाली करुवा दाँते आदीको बारेमा जानकारी नहुने सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भएको तर अल्प व्यावहारिक ज्ञान भएका नागरिक भन्दा आफ्नो परिवेशलाई समेत साक्षत्कार गर्ने गराउने गरेर सिक्ने खालको शिक्षाको अवलम्बन गर्नु आजको खाँचो हो ।
शिक्षाले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । माछा मारेर खुवाउने भन्दा पनि माछा मार्न सिकाउने खालको जाँगरिलो पौरखी शिक्षा हुनुपर्दछ । अतःदैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने खालको शिक्षा हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिको प्रमाण पत्रको प्राप्तांकभन्दा पनि उसले देखाउने वानि व्यवहार,चाल चलन,चरित्रको आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा परिभार्षित हुनुपर्दछ ।
पेपर पेन्सिल परीक्षाको आधारमा मात्रै विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर गणितीय प्रस्तुति गरिने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै शिक्षाको मूल मर्मअनुसार व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनको आधारमा मूल्यांकन गर्ने उपायहरु खोजिनुपर्दछ । उच्च अंक प्राप्त गर्नेले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो मूल्यांकन पद्धति कसरी विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किन कि एक सय पूर्णांकमा सरदर ३२ प्रतिशत मात्रै विषयवस्तु जानेमा उत्तीर्ण हुने पद्धतिलाई पुनरवलोकन गरिनुपर्दछ । त्यस प्रकारको परीक्षाबाट पनि सरदर ५२ प्रतिशत अंक मात्रै विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अध्ययन अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । कतिपय विषयमा पूर्णांक प्राप्त गर्नु आठौं आश्चर्य भएको छ ।
अर्कोतर्फ कतिपय विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरुकोे व्यवहार अपेक्षाकृत सकारात्मक भएको पनि देखिन्न । त्यसकारण सिर्जनशील, लगनशील, प्रतिस्पर्धी, उत्साही, एवम् ऊर्जाशील सफल नागरिक बनाउनेखालको व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । जसलाई पौरखी शिक्षा भन्न सकिन्छ । जसअनुसार श्रमप्रति सम्मान जगाउने धारणाको विकास गराउनु पर्दछ ।
घर परिवारमा पनि सहज शैक्षिक वातावरण बनाउन विद्यालयले विद्यार्थीको पठनपाठनबारे अभिभावकसँग निरन्तर सम्पर्क राख्ने नीति लिनुपर्दछ । त्यसकारण त्यहाँको वातावरण पनि बालबालिकाको रुचि क्षमताअनुसार दिनानुदिन विज्ञान र प्रविधिमा भइराखेको प्रगतिको उच्चतम प्रयोगको अभ्यास गर्ने गराउने सहज अवसर पाउने खालको हुनुपर्दछ । उनीहरुको जीवनशैलीलाई सुविधा सम्पन्न, प्रभावकारी र प्रभावशाली बनाउँदै निरन्तर समाज र देशलाई प्रगतिउन्मुख बनाउन प्रयत्नशील जिम्मेवार नागरिक बनाउने खालको प्रगतिशील शिक्षा आजको खाँचो हो ।
बालबालिका भन्दा हामी जान्ने छौं । हामीले भनेको मात्र उनीहरुले मान्नुपर्दछ भन्ने पुरातनवादी सोचका आधारमा उनीहरुलाई जबर्जस्ती लाद्ने खालको विषयवस्तु र विधिभन्दा पनि उनीहरुको क्षमता मागअनुसारको शैक्षिक वातावरण बनाउने पौरखी नागरिक उत्पादन गर्ने पहिलो शर्तको रुपमा लिन सकिन्छ । कार्यकुशलतालाई निखार दिन स्थानीय आवश्यकताअनुसारको खपत हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालका पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्यवन गरिनुपर्दछ । व्यावसायिक शिक्षाको प्रयोगात्मक कक्षामा उत्पादित सामान बजारसम्म लाने र ग्राहकलाई बेच्ने अभ्यास गराएर उनीहरुमा आत्मबल र आत्मविश्वास गराउनुपर्दछ ।
ठूलोमान्छे भन्दा पनि असल नागरिक बन्न प्रे्ररित अर्थात् आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने पौरखी नागरिक बन्ने अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा विद्यालय परिभाषित हुनुपर्दछ । अतः उच्च प्राप्तांकलाई मात्र गुणस्तर देख्ने सामाजिक संस्कार संस्कृति र भौतिक उपलब्धिलाई मात्र प्राथमिकता दिइने प्रगतिशील शिक्षाभन्दा श्रमप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै परिश्रमको मूल्य र मान्यतालाई मर्यादित बनाउनेतर्फ प्रयास गर्ने खालको शिक्षा आजको खाँचो हो । जसले श्रमको पूजा गर्दै भेदभावरहित भावना व्यवहार भएको संस्कारयुक्त तथा कुनै कुरा सिकेपछि त्यसको आधारमा अन्य कुराहरु रचना र सिर्जना गर्दै परिवर्तित विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सभ्य, सुशील, स्वाभिमानी देशभक्त नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षाको तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट मात्र ब्रेन ड्रेनलाई रोक्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)